गति प्रतिपादन घाइते पहिलो सहायता महत्वपूर्ण छ। हराएको समय नतिजा दुःखद गर्न सक्छ। यो घाउ निम्न प्रकार मा विभाजित छन्:
जो पातलो तेज प्राप्त गर्न सकिन्छ क) प्वाल पार्ने काम घाउ,
वस्तुहरु। तिनीहरूले सानातिना बाह्य क्षति र प्रशस्त बाह्य रक्तस्राव को अभावमा विशेषता छन्। अक्सर घाउ आन्तरिक अङ्गहरू र आन्तरिक रक्तस्राव गर्न क्षति समावेश प्वाल पार्ने काम।
ख) घाउ काटन सीधा किनाराको फरक गहिराइमा र लम्बाईहरू संग कटौती छन्। ठूलो धमनिहरु को क्षेत्र मा सबै भन्दा खतरनाक कट घाउ।
ग) छुरी हान्नु घाउ को घटक को एक एक predominance संग, प्वाल पार्ने काम र कट को संयोजन हो।
G) कटा घाउ एक भारी वस्तु धारिलो झटका को परिणाम हो। तिनीहरूले किनभने प्रवेश को ठूलो गहिराई र सम्बन्धित क्षति, कहिलेकाहीं जीवन नमिल्ने को अति खतरनाक छन्।
घ) घाउ एक भुत्ते वस्तु प्रभाव को एक परिणाम रूपमा देखा र गंभीर दबाउन नरम Tissues सँगसँगै contused।
ई) Lacerations विषयमा एक परिणाम दांतेदार वा आकार मा अनियमित घाउ छन्।
घाउ लागि पहिलो सहायता को रक्तस्राव रोक्न छ। यो एक औंला एक धमनी एक रक्त पोत को क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा रगत प्रवाह रोक्न आफ्नो औंलाहरु थिचिएको छ जसमा बाटो हुन सक्छ। पहिलो सहायता घाउ लागि एक तंग दबाव पट्टी imposing को रूप मा प्रदान गर्न सकिन्छ। यो विधि limbs को सानो रक्त नली बाट आक्रान्त रोक्न प्रयोग गरिन्छ। यसरी Bint शक्ति लगाएको हुनुपर्छ। विकल्प पहिले tourniquet प्रयोग गाया, घाउ लागि सहायता हुन सक्छ। यो विधि हिप र काँध को क्षेत्र मा ठूलो धमनिहरु को क्षति को मामला मा, साथै जहाँ एक पेशेवर चिकित्सा हेरविचार ढिला भयो मामला मा रूपमा प्रयोग गरिन्छ। Tourniquet अब 45-50 मिनेट भन्दा लागू गर्न सकिँदैन, र हिउँदमा
30 मिनेट भन्दा कुनै थप। को पट्टी अन्तर्गत निश्चित टिप्पणी राख्नुपर्छ
अज्ञात सही समय ओभरले। Tourniquet मात्र ऊतक भन्दा लागू गरिन्छ
पट्टियाँ वा वस्त्र। घाउ लागि पहिलो सहायता, यदि तपाईं यी विधिहरू प्रयोग गर्न सक्दैन, यो घाउ को एक तंग tamponade को रूप मा देखिन्छ। यो धमनिहरु देखि आक्रान्त रोक्न प्रयोग गरिन्छ मात्र चरम को घाउ।
लागि पहिलो सहायता गोलीचलेकोआवाज घाउ घाउ को गंभीरता को तीव्र मूल्यांकन मा निहित। क्षति को प्रकृति फरक हुन सक्छ, यो बुलेट को अत्यावश्यक अङ्गहरू चोट थिएन महत्त्वपूर्ण छ। गोलीचलेकोआवाज घाउ अक्सर प्रदूषण, हड्डी टुकडे र क्षतिग्रस्त Tissues उपस्थिति द्वारा जटिल छन्। चोट जो ठाउँ र बुलेट प्वालहरू प्रकार, साथै मानव व्यवहार, हुन सक्छ चोट खुलारूपमा निर्धारण। घाउ लागि पहिलो सहायता रगत हानि रगत-स्थानापन्न समाधान replenishing सुझाव दिन्छ। analgesics वा विरोधी आघात एजेन्ट प्रशासन आवश्यक छ। तपाईं पनि हड्डी भंग लागि घायल जाँच्न आवश्यक छ। तिनीहरूले पत्ता भने, सिकार हुनुपर्छ
रूपमा तीव्र टुकडे धमनिहरु बिगार्न र worsen सक्नुहुन्छ immobilize,
स्थिति। आवश्यक पहिलो सहायता प्रदान गरे पछि, घाइते मानिस आवश्यक
तेर्सो स्थिति राख्नु र एक एम्बुलेन्स कल। परिवहन
रोगी स्वतन्त्र सिफारिस गरिएको छैन। को मामला मा हृदय गिरफ्तारी जरूरत
सञ्चालन गर्न कृत्रिम श्वसन। तपाईं पनि छाती संकुचन गर्नुपर्छ।
आन्तरिक आक्रान्त घाइते आन्तरिक गुहा मा उत्पन्न भने, जटिलताहरू अक्सर उत्पन्न pneumothorax को फारम वा hemothorax। हावा मा चोट रोक्न, यो सफा सामाग्री संग तंग क्लंप र एक अर्ध-बसिरहेका स्थिति रोगी बस्न आवश्यक छ। घाउ संक्रमण जोगिन गर्न, तपाईं किनाराको सम्हाल्न र घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने तयारी स्टेराइल सामाग्री लागू गर्न आवश्यक छ।
मानव को limbic सिस्टम: संरचना र कार्य
कसरी dropper राख्न? किन?
एक रोचक इतिहास संग चिप्स - "Pringles"
गाउन, नृत्य, राम्रो हेर्न ... अनि यो सबै - समूह "क्रीम"
आम disappearances को अविश्वसनीय कथाहरू
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा के छेड्नु सैलून गर्नेछ?
सेन्ट पीटर्सबर्ग को Orphanages सधैं स्वागत छ